Ndilonakalisile njani igama lam ngeMithombo yeendaba yeNtlalo ... Kwaye kufuneka ufunde ntoni kuyo | Martech Zone
NgoMvulo, Februwari 22, 2021 NgoLwesine, Aprili 7, 2022 Douglas Karr
Ukuba ndikhe ndonwabile ukudibana nawe ngobuqu, ndiqinisekile ukuba uya kundifumana ndinobuntu, ndihlekisayo, kwaye ndinemfesane. Ukuba andikaze ndidibane nawe ngesiqu, nangona kunjalo, ndiyoyika into oza kuyicinga ngam ngokusekwe kubukho bam kwimidiya yoluntu.
Ndingumntu onomdla. Ndiyawuthanda umsebenzi wam, usapho lwam, abahlobo bam, ukholo lwam, kunye nezopolitiko zam. Ndiyithanda kakhulu incoko nakwesiphi na kwezi zihloko… ke xa amajelo eendaba ezentlalo avela ngaphezulu kweminyaka elishumi eyadlulayo, ndatsiba eli thuba lokubonelela kunye nokuxoxa ngeembono zam kuwo nawuphi na umxholo. Ndinomdla wokwenene ngoba abantu bakholelwa kwinto abayenzayo kunye nokuchaza ukuba kutheni ndikholelwa endikwenzayo.
Ubomi bam basekhaya ekukhuleni babunokwahluka okumangalisayo. Oku kuquka zonke iinkalo - inkolo, ezopolitiko, ukuthanda ezesondo, ubuhlanga, ubutyebi… njl. Walamkela ithuba lokuqhekeza isonka naye nabani na ukuze ikhaya lethu lihlale livulekile kwaye iincoko bezihlala zinomdla kodwa zinembeko emangalisayo. Ndikhulele kwikhaya elamkela nayiphi na incoko.
Isitshixo sokuqhekeza isonka nabantu, nangona kunjalo, kukuba ubabajongile emehlweni kwaye bayayibona imfesane kunye nokuqonda okuzise etafileni. Ufundile malunga nokuba bakhule njani kwaye bakhule njani. Ungasiqonda isizathu sokuba bakholelwe kwinto abayenzileyo ngokusekwe kumava nakwimeko abayizisileyo kwincoko.
Imidiya yokuncokola ayikhange ilonakalise igama lam
Ukuba undinyamezele kule minyaka ilishumi idlulileyo, ndiqinisekile ukuba uzibonele ngomnqweno wam wokuzibandakanya kwimidiya yoluntu. Ukuba usajikelezile, ndiyabulela ukuba uselapha - kuba ngokungazi ndatsiba kwimithombo yeendaba zentlalo ndonwabile ngeli thuba lokwakha unxibelelwano olungcono kunye nokuqonda ngcono abanye. Yayilichibi elingenzulu, ukutsho nje okuncinci.
Bekunokwenzeka ukuba ubungandibona ndithetha kumsitho, ubusebenza nam, okanye ubuke weva ngam kwaye wandongeza njengomhlobo nakweliphi ijelo leendaba ezentlalo… ndanxibelelana nawe kwi-intanethi ngokunjalo. Amajelo wam eendaba ezentlalo ayincwadi evulekileyo - ndabelana ngeshishini lam, ubomi bam, usapho lwam… ewe… ezopolitiko zam. Zonke zinethemba lokunxibelelana.
Ayenzekanga loo nto.
Ukuqala kwam ukucinga ngokubhala le post, bendifuna ukuyibeka isihloko Indlela amaJelo eendaba oLonakalisa njani igama lam, kodwa oko ngekwakundenze ixhoba kanti bendililungu elizimisele ukuthatha inxaxheba ekufeni kwam.
Khawufane ucinge xa ​​usiva abanye bekhwaza bekwelinye igumbi apho abahlobo banomdla wokuxoxa ingxoxo ngesihloko esithile. Ubaleka ungene egumbini, ungawuqondi umxholo, ungayazi imvelaphi yomntu ngamnye, kwaye ukhwaza uluvo lwakho oluhlekisayo. Ngelixa abantu abambalwa banokuyixabisa, uninzi lwababukeleyo lunokucinga nje ukuba uyintsimbi.
Ndingulaa mfondini. Ngaphezulu, nangaphezulu, nangaphezulu.
Ukudibanisa umba, amaqonga anjengeFacebook ayezimisele ukundinceda ekufumaneni amagumbi angxolayo aneyona mpikiswano inamandla. Kwaye ngokunyanisekileyo ndandingazi ngeziphumo. Emva kokuvula unxibelelwano lwam nehlabathi, ihlabathi ngoku liye labona eyona ndlela ndinxibelelana ngayo nabanye.
Ukuba bendibhalile ngohlaziyo (Ndithe tag #goodpeople) owabelana ngebali malunga nomntu owazincamayo wanceda omnye umntu… ndingafumana imibono eliqela. Ukuba ndaphosa i-barb kuhlaziyo oluthile lwezopolitiko, ndinamakhulu. Uninzi lwabaphulaphuli bam kuFacebook babona kuphela icala lam elinye, kwaye kwakubi.
Kwaye ke, imithombo yeendaba zentlalo yayonwabile ngakumbi kukuziphatha kakubi. Bayibiza njalo Nxaxheba.
Yeyiphi iMithombo yeendaba yeNtlalo engekhoyo
Yeyiphi imithombo yeendaba kwezentlalo esilela kuyo nayiphi na imeko Andikwazi ukukuxelela ngalo lonke ixesha endinikeza ingxelo kwaye kwangoko kwabhalwa ngokuchaseneyo nento endiyikholelwayo. Uhlaziyo ngalunye lweendaba zentlalo oluthi ii-algorithms zikhuthaze ukutyhala kunye nokutsala kwizizwe zabo babini abaphulaphuli abaya kuhlaselo. Ngelishwa, ukungaziwa kuyongeza kuyo kuphela.
Umxholo ubalulekile kuyo nayiphi na inkqubo yenkolelo. Kukho isizathu sokuba abantwana bahlala bekhula ngeenkolelo ezifanayo njengabazali babo. Ayiyo ukufundiswa, kuyinyani ukuba yonke imihla bafundisiwe kwaye bavezwa kwinkolelo evela kumntu abamthandayo nabahloniphayo. Le nkolelo ixhaswa ngokupheleleyo ekuhambeni kwexesha ngamawaka okanye ngamakhulu amawaka okunxibelelana. Hlanganisa loo nkolelo kunye namava axhasayo kwaye ezo nkolelo zitshixiwe. Inzima loo nto - ukuba akunakwenzeka - ukujika.
Andithethi ngentiyo apha… nangona kabuhlungu inokuba ifundwe ngokunjalo. Ndithetha ngezinto ezilula… njengokukholelwa kumandla aphezulu, imfundo, indima karhulumente, ubutyebi, ushishino, njl njl. Inyaniso yeyokuba sonke sineenkolelo ezendeleyo kuthi, amava aqinisa ezo nkolelo, kunye nemibono yethu. zehlabathi zahlukile ngenxa yazo. Yinto ekufuneka ihlonitshwe kodwa ihlala ingekho kwimithombo yeendaba.
Omnye umzekelo endihlala ndiwusebenzisa lishishini kuba ndandingumqeshwa de ndaneminyaka engama-40 ubudala. Ndide ndiqale ishishini lam kwaye ndiqeshe abantu, bendingenalwazi ngayo yonke imiceli mngeni yokuqalisa nokuqhuba ishishini. Khange ndiyiqonde imigaqo, uncedo olulinganiselweyo, ubalo-mali, imiceli mngeni yokuhamba kwemali kunye nezinye iimfuno. Izinto ezilula… njengenyaniso yokuba iinkampani zihlala (kakhulu) emva kwexesha zihlawula ii-invoyisi zazo.
Ke, njengoko ndibona abanye abantu abangazange baqeshe mntu onika uluvo lwabo kwi-intanethi, ndikhona kukubonelela ngezam! Umqeshwa oqhubeke nokuqhuba ishishini lakhe wanditsalela umnxeba emva kweenyanga wathi, "Andizange ndikwazi!". Inyani yile de ube ukwizihlangu zomnye umntu, nguwe wedwa Ndicinga uyayiqonda imeko yabo. Inyani yile yokuba ngekhe uqhubeke ulapho.
Ndilungisa njani igama lam leMidiya yokuSasazeka
Ukuba uyandilandela, uya kubona ukuba ndibandakanyekile, ndinoluvo lomntu kwi-intanethi kodwa ulwabelwano kunye nemikhwa yam itshintshe kakhulu kule minyaka imbalwa idlulileyo. Esi sisiphumo esinzima sokuphulukana nabahlobo, ukukhathaza usapho, kwaye… ewe… nokuphulukana neshishini ngenxa yoko. Nantsi ingcebiso yam yokuqhubela phambili:
Abahlobo bakaFacebook kufanele ukuba babeFrien yokweneneds
I-algorithms ku-Facebook zezona zimbi kwezam iimbono. Ngesinye isikhathi, ndandinama-7,000 abahlobo kufacebook. Ngelixa ndiziva ndikhululekile ukuxoxa kunye nokuphikisana ngezihloko ezimibalabala nabahlobo abasondeleyo kuFacebook, iveze olona hlaziyo lwam lubi kubo bonke abantu abangama-7,000. Ibiyinto embi leyo njengoko iligqithile inani lohlaziyo oluqinisekileyo endabelana ngalo. KuFacebook wam abahlobo ndibone nje olona hlaselo lukhulu, oloyikisayo, oluhlaziyayo lwam.
Ndiyinciphisile i-Facebook ndaya kubahlobo abangaphezu kwe-1,000 XNUMX kwaye ndiza kuqhubeka nokunciphisa ubungakanani obuhamba phambili. Ubukhulu becala ndiyiphatha ngoku yonke into ngokungathi iya esidlangalaleni- nokuba ndiyiphawula ngale ndlela okanye hayi. Ukuzibandakanya kwam kwehle kakhulu kuFacebook. Ndikunomdla wokuqonda ukuba ndibona abona bantu bambi, nabo. Ndihlala ndicofa kwiprofayili yabo ukuze ndibone kakuhle umntu olungileyo.
Ndiyekile nokusebenzisa i-Facebook kwishishini. I-algorithms ye-Facebook yakhelwe ukuba uyenze ahlawule ukuba uhlaziyo lwakho lwephepha lubonakale kwaye ndicinga ukuba kubi ngenene. Amashishini achithe iminyaka esakha oku kulandelayo emva koko u-Facebook wakrazula konke kodwa wahlawula izithuba ezivela kubalandeli babo… belahlekelwa ngokupheleleyo kutyalo-mali abalwenzileyo ekupheliseni uluntu. Andikhathali nokuba ndingafumana ishishini elingakumbi kuFacebook, andizukuzama. Ukongeza, andifuni ukubeka umngcipheko kwishishini ngobomi bam bobuqu apho-ekulula kakhulu.
I-LinkedIn kuphela yeShishini
Ndisavulekile ukuba ndinxibelelane nabani na on LinkedIn kuba ndiza kwabelana kuphela ngeshishini lam, amanqaku am ahambelana neshishini, kunye neepodcast zam apho. Ndikhe ndabona abanye abantu besabelana ngohlaziyo lobuqu apho kwaye ndingacebisa ngokuchasene nayo. Awungekhe ungene kwigumbi lebhodi kwaye uqale ungxolise abantu… sukuyenza kwi-LinkedIn. Igumbi lakho lebhodi ekwi-intanethi kwaye kufuneka ugcine elo nqanaba lobuchwephesha apho.
I-Instagram yeyona Ngalo yam ibalaseleyo
Akukho ngxoxo incinci okanye akukho, ngombulelo, kwi-Instagram. Endaweni yoko, kukujonga ubomi bam endifuna ukuyikhusela ngononophelo kunye nokwabelana nabanye.
Nokuba kwi-Instagram, kufuneka ndilumke nangona. Ingqokelela yam ebourbon ibininzi eneneni abantu banxibelelana nam ngaphandle kwenkxalabo yokuba ndinganxila. Ukuba i-Instagram yam ibizwa ngokuba yi "My bourbon collection", umqolo weebourbons endiziqokeleleyo ungalunga. Nangona kunjalo, iphepha lam ndim… kwaye inkcazo yam ibubomi obungaphezulu kwama-50. Ngenxa yoko, mininzi kakhulu imifanekiso yebourbon, kwaye abantu bacinga ukuba ndinxilile. Oy.
Ngenxa yoko, ngabom kwimizamo yam yokwahlula iifoto zam ze-Instagram ngeefoto zomzukulwana wam omtsha, ukuhamba kwam, iinzame zam zokupheka, kunye nokujonga ngononophelo kubomi bam.
Bantu… I-Instagram ayibobomi bokwenyani… ndiza kuyigcina injalo.
Ndabelana ngokukhululekileyo kwi eyakho iTwitter akhawunti kodwa ndinayo ingcali Martech Zone kwaye Highbridge ukuba ngokungqongqo isahlulo. Ndisoloko ndibazisa abantu umahluko. Ndiyabazisa ukuba Martech ZoneIakhawunti kaTwitter isam… kodwa ngaphandle kwezimvo.
Into endiyibulelayo nge-Twitter kukuba ii-algorithms zibonakala ngathi zinika umbono olungeleleneyo ngam endaweni yee-tweets zam ezinokuphikisana. Kwaye… iingxoxo kuTwitter zingenza uluhlu lwenqaku kodwa ungasoloko utyhutyha umlambo. Ndinezona ncoko zanelisayo kuTwitter… nokuba sele bekwimpikiswano enomdla. Kwaye, ndingahlala ndiyichitha incoko efumana imvakalelo ngegama elinobubele. KuFacebook, oko kubonakala kungenzeki.
I-Twitter izakuba lijelo elinzima kum ukuba ndinike izimvo zam… kodwa ndiyaqonda ukuba isenokwenzakalisa isidima sam. Impendulo enye ethathwe ngaphandle kwencoko yayo yonke iprofayile yam inokupela ukonakala. Ndichitha ixesha elininzi ndithatha isigqibo malunga nento endibelana ngayo kwi-Twitter kunokuba bendinayo ngaphambili. Amaxesha amaninzi, andikhe ndicofe ukupapasha kwi-tweet kwaye ndiqhubeke.
Ngaba lolona lwazi lukhulu kukungabi nayo?
Ngeli xesha, ndiye ndoyika iinkokeli kushishino lwam ezihlonitshwa kakuhle eziqeqesheke ngokwaneleyo ukuba zingaze zime kumajelo eendaba ezentlalo. Abanye banokucinga ukuba bubugwala obu… kodwa ndicinga ukuba kufuna isibindi esingaphezulu ukugcina umlomo wakho uvaliwe kunokuba uzivule ukuze ugxekwe kwaye urhoxise isiko esilibona likhula ngokukhawuleza kwi-Intanethi.
Elona cebiso lilungileyo, ngokudabukisayo, mhlawumbi ungaze uxoxe ngayo nantoni na ephikisanayo enokuchazwa ngendlela engeyiyo okanye ikhutshwe emxholweni. Ngokuya ndisiba mdala, kokukhona ndibona aba bantu bekhulisa amashishini abo, bemenywa etafileni ngakumbi, kwaye badume ngakumbi kwishishini labo.
Yinyani elula yokuba bendikhe ndahlukanisa abantu abangazange badibane nam ngesiqu, abangazange babone imfesane yam, kwaye abangazange babonakaliswe kwisisa sam. Ngenxa yoko, ndiyazisola ngezinye zezinto endabelana ngazo kwiminyaka edlulileyo kwimidiya yoluntu. Ndifikelele kubantu abaliqela ndaza ndacela uxolo ngokobuqu, ndibamemela ikofu ukuze bandazi ngcono. Ndifuna ukuba bandibone ukuba ndingubani kwaye ndingabi sisidumbu esibi esiboniswe yiprofayili yam yemidiya yoluntu. Ukuba ungomnye wabo bantu… Nditsalele umnxeba, Ndingathanda ukufumana.
Ngaba ayibuhlungu into yokuba isitshixo kwimithombo yeendaba zentlalo sinokuthi sikuphephe ukuyisebenzisa ngokupheleleyo?
QAPHELA: Ndihlaziye ukukhetha ngokwesondo kukhetho lwesini. Amagqabantshintshi abonakalise ngokufanelekileyo ukusilela kokubandakanya apho.
tags: douglas karrIgama le-Facebookinstagram igamaigama elidibeneyoudumo onlineidumelaImidiya yokuncokolaimithombo yeendaba zentlaloIgama le-twitter
Oku kubandakanya zonke iimbono - inkolo, ezopolitiko, ukhetho lwezesondo, uhlanga, ubutyebi ... njl.
Uyakubonwa njengangoku ngakumbi kwaye ubandakanyekile ukuba usebenzisa ukuziqhelanisa nesondo endaweni yokukhetha. Asikhethi ukuba tye, gay, okanye nantoni na eyenye. Bubuntu bethu.
Inqaku elilunge kakhulu, ndiza kulilungisa inqaku njengoko ngokuqinisekileyo yayingumoya walo.
NGENENE NDIYAKUTHANDA ukuba uyibhale le nto. Ibonisa ukuba ngenene awufundanga nto. Iithiyori zakho zamayelenqe, intiyo, kunye nobudenge bubonke ibiyingxaki. Imidiya yoluntu ayilotshaba (njengoko ubonisile) eneneni ungumntu onentiyo… Khumbula laa tweet apho uthe ngokukhawuleza “ubafumanele iglu yegorila” malunga nokuvuza kweradioactive eJapan? Ndikhumbula… bekuyientsuku ezili-10 ezidlulileyo. Ndiyathemba ukuba igama lakho liyaqhubeka ukuhla le ndlela.
Zack, enkosi ngezimvo zakho. Ndicinga ukuba iyalixhasa inqaku lam kunye nembono yemithombo yeendaba zentlalo njengoko ngokucacileyo unombono ombi ngam ngelixa oogxa bam, abathengi kunye nabahlobo bengenayo. Ndikunqwenelela okuhle kodwa.
Wowu! Doug leliphi inqaku elimangalisayo eligcwele ukuqonda kwizinto ekufuneka sonke sizazi ngakumbi umntu ngamnye. Kodwa njengoko sele ukhankanyile, ukubaluleka kokwenza oko xa uzama ukulinganisa ukuba ngumntu kwaye uqhuba ishishini le-intanethi ngumngeni ngakumbi kwaye ujijekile!
Kubonakala ngathi mna nawe saqala kolunxibelelwano lwe-intanethi kunye nolunxibelelwano kunye nomnye kwiminyaka emininzi eyadlulayo ngoku, kubonakala ngathi bekuhlala kunjalo. Iikomityi ezininzi zekofu kwiikhefi ezahlukeneyo kunye namashishini asendleleni. Akukho sikhubekiso nakuphi na kobunye ubuhlobo bam ukusuka kwiintsuku Circle City, eyakho kwenye endizisola kakhulu ukuba kude kakhulu ukusuka ngokwejografi ukuba asikwazi ukwabelana ikofu ngakumbi, iingxoxo, iingxoxo, ukuhleka kunye ewe, mhlawumbi abanye bourbon kunye rhoqo ngakumbi.
Nantsi kuwe, amashishini ethu kunye nemidiya yoluntu. Ngamana singaqhubeka nokujonga kula manzi ngononophelo ngokwethu kwaye sincede ekukhokeleni abathengi bethu ngokukhuselekileyo phakathi kwamanxweme nawo!
Enkosi! Kwaye bendihlala ndibuxabisa ubuhlobo bethu.